Home / Blog / Azo havaozina ny trano fidiovana !!! Ny trano fandroana dia ho fantatry ny olona
2021 / 01 / 11 FisokajianaBlog 2511 0
Sekoly fandraharahana amin'ny trano fidiovana 2020-11-27
Fandroana sy lakozia, azo inoana fa ny toerana be mpampiasa indrindra ao an-trano. Raha lazaina amin'ny fomba somary mifangaro, ny trano fidiovana dia tontolo sarotra kokoa. Ary ny haingon-trano dia tena zava-dehibe amin'ny fianakaviana tsirairay, ny fananana trano fidiovana mamirapiratra sy madio ary milamina dia afaka mitondra fialan-tsasatra lehibe ho antsika. Androany, andao hiresaka ny fizotran'ny fanavaozana ny fandroana. Ireo izay te-hanavao ny efitranony dia tsy hadino izany!
Fanavaozana ny fandroana ny fanasokajiana
Ny haingon-trano fandroana dia mahatafiditra indrindra ny taila amin'ny rindrina sy ny fanadiovana ara-pahasalamana eo amin'ny lafiny roa amin'ny fizotran'ny fananganana: ny taila amin'ny rindrin'ny rindrina → valindrihana → taila vita amin'ny birao → fametrahana fidiovana, koveta, fantsona → fametrahana fantsona mampifandray → fametrahana jiro, faladiany, fitaratra → fametrahana ny barany lamba famaohana sy kojakoja finday hafa.
Fandehanan'ny fizotran'ny fikolokoloana ny fahadiovana
1 / Fantsona mpanohitra: ampidiro ny kofehy fanitarana mihodina mafy, ahantony ny fitoeran-drano fantsom-bokatra ary apetaho eo amin'ny talantalana ny tavy mba hahitana ny haavony, ny rano dia mifandray amin'ny tavy mba hanitsy, ary avy eo mifandray amin'ny rano.
2 / Fandroana: Ny dingana fametrahana marina dia ny fametrahana ny fandroana aloha ary avy eo apetraka ny rano, ary apetraka ny rano aorian'ny fanidiana mafy azy io miaraka amin'ny putty, ary amin'ny farany manandrana mametaka ary mahita ny mety.
3 / fandroana: orifice rano mangatsiaka sy mafana miaraka amin'ny fantsom-panandramana hahitana ny haavony, ny haben'ny faritra fohy norefesina napetraka tao anaty orifice taorian'ny menaka firamainty varahina fanosorana varahina, fonosina ary henjana ny voanjo, napetraka tao amin'ny rindrina aorian'ny fantsom-barahina ambony napetraka ao anaty tee seranan-tsambo, ary farany namboarina tamin'ny rindrina tamin'ny visy hazo.
4 / Toilet: zahao aloha ny fantsom-pitetezana ny tany, ampifanaraho ny vavan'ilay fantsom-panafody rehefa avy nanisy marika tsara ianao, manapoka lavaka, ary avy eo manosotra putty napetraka voa tsara paosy. Ao ambadiky ny fitoeran-drano dia misy lavaka roa mba hanaovana marika tsara, kitiho ny lavaka ary ampidiro mafy ny bolt ary ahodino mafy. Aorian'ny fikororohana ny voanjo any ambadiky ny tanky, apetraho amin'ny vodin-tanana ny vodin'ilay tanky, apetraho ny varavarana valo, aondraho ny hazavan'ny jiro ary ampidiro ny varavarana haingam-pandeha sy varavarana valo.
Fandehanan'ny fizotry ny fanavaozana ankapobeny
1 / Mamolavola programa: Ho an'ny fanavaozana ampahany amin'ny trano fandroana, ny zavatra voalohany dia ny fanamafisana ny tetikasa fandravana sy ny fanavaozana ny ampahany mihamitombo amin'ny tranokala, tsara kokoa ny hijeren'ireo matihanina ao an-trano, arakaraka ny fepetra sy ny filan'ny tompony no mamaritra ny tetikasa fandravana sy fanavaozana. Ny olona sasany dia mila manao fanamboarana rindrina fotsiny, avy eo azo avela tsy hikasika ny taila. Ny olona sasany dia te-hanao ny fanavaozana manontolo, ary ny sasany aza te-hamindra ny rindrin'ny efitrano fidiovana ivelany, hanova ny habaka ho lehibe kokoa na ho kely kokoa, na hanao ny fisarahana mando sy maina. Ireo rehetra ireo dia mila tsaraina eny an-toerana hahitana raha mety hatao ary azo atao. Avy eo amin'ny fahafantarana ny fahazaran'ny tompony, ny famaritana voalohany ny fanaka miasa sy ny fananganana socket ao amin'ny trano fidiovana, mamaritra ny programa fananganana sy fanavaozana voalohany.
2 / Fandravana ny fiarovana taloha: Raha ny lavarangana ety ivelan'ny trano fidiovana tazomina, ny raharaha misy ny taila amin'ny gorodona ao anatiny, ary koa ny fanitarana ny fandroana mifanentana amin'ny gorodon'ny efitrano amin'ny lafiny ilan'ny rindrina, dia tokony hanao asa fiarovana. hialana amin'ny fahasimban'ny tany eo am-panaovana dondona sy famotehana, fikirakirana biriky fako. Ny fiarovana matihanina amin'ny gorodona dia hapetraka amin'ny sosona telo, voalohany, ny sarin'ny sarimihetsika fiarovana voaroaka manokana Panasonic apetraka amin'ny tany, ampiana taratasy manify iray ampiana eo amboniny, ary farany sosona solaitrabe sivy apetraka. Fiarovana telo sosona mba hahazoana antoka fa ny tany amin'ny fizotran'ny fananganana tsy misy simba.
3 / Fandravana ny fanamboarana taloha: aorian'ny fahavitan'ny fepetra fiarovana, voalohany indrindra, ny trano fidiovana, ny fononteny nesorina daholo. Tsy ampiasaina hanadio, mbola misy fononteny ampiasaina napetraka amin'ny toerana raikitra mba hiarovana. Manaraka izany ny fampiasana marotoa elektrika sy fitaovana matihanina hafa hanalana ny valindrihana, ny taila amin'ny rindrina, ny gorodona. Raha niova ny lamina habakabaka dia esorina ny rindrina mifanaraka amin'izany ary manangana rindrina vaovao. Ho an'ny rindrina fandroana vaovao an'ny efitra fandroana, mba hisorohana ny fivoahan'ny rano any ambany, ny fizotran'ny fomba ofisialy dia ny haavon'ny 375px ambonin'ny tany miaraka amin'ny simenitra hananganana tara-pahazavana tsy misy rano, ary avy eo biriky eo amboniny.
4 / Asa miafina: fanavaozana ny efitra fandroana mba hampisy sakana maromaro, fantson-drano, na ilay famindrana taloha mba hanaovana famindran-toerana, mba hahatratrarana ny lamina vaovao fanaon'ny olona. Mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny asa miafina sy ny serivisy aorian'ny fivarotana, matetika dia ilaina ny manisy marika ny toerana misy ny tsipika taloha sy vaovao mifamatotra amin'ny takelaka banga na faladiany vaovao. Raha sendra olana dia mora ny mahita ireo teboka manahirana rehefa manamboatra. Amin'ny safidin'ny tariby, fantson-drano, tsara kokoa ny fampiraisana ny fampiasana tariby Panda, fantson-drano Pilsa ary marika fanta-daza hafa, hahafahana milalao injeniera miafina tsara eto ambany.
5 / haavo tsy tantera-drano: ho an'ny fanesorana ny rindrin'ny biriky sy ny gorodona ary ny rindrina vaovao, ny tampon-tany misy latabatra simenitra, maina ary borosy indroa matevina tsy tantera-drano. Rehefa vita ny sosona tsy tantera-drano dia azonao atao ny manamboatra ny rindrin'ny rindrina vaovao, ary ny fametrahana valindrihana, ny akaiky indrindra amin'ny tany izay tsy apetaka amin'ny boribory misy rindrina. Aorian'izay, ny tany ao amin'ny trano fandroana mba handalo fitsapana manokana momba ny rano, izany hoe ny gorodon'ny efitrano fidiovana, mihidy amin'ny haavon'ny rano, dia manisy marika. Mialà 24 ora aorian'izay hijerena raha miova ny haavon'ny rano, hahazoana antoka fa tsy misy famoahana ny sosona tsy misy rano ary maina alohan'ny fisokafan'ny taila.
Fametrahana 6 / fanadiovana: Ary farany, ny fametrahana ny kojakoja fidiovana, ny kojakoja ary ny kojakoja toy ny trano fidiovana, ny varavarana misosa amin'ny fandroana, ny fandroana, ny famaohana lamba famaohana, sns .. Ity dingana ity dia misy lavaka fandavahana ao anaty rindrina, ka ireo mpiasa manara-penitra amin'ny fananganana dia hampiasa ny taratasy amerikana hanisy marika ny andalana tetikasa miafina tany am-boalohany, mba tsy hanimba ny tsipika fantson-drano mandritra ny fametrahana ny fandavahana fitaovana. Mazava ho azy, aza adino ny mamita ny asa fanadiovana ny tranokala, hahazoana antoka fa madio sy milamina ny tompon'ilay tranokala.
Previous :: Miala tsiny fa manana ireo olana ireo ny trano fidiovana fa tsy olana amin'ny kalitao! Next: Ahoana no hatao raha voasakana indray ilay orana? Aza maika! Ampiasao handrahoana… Fahagagana! Faingana hilazana ny mpanjifanao!
Miala tsiny fa manana ireo olana ireo ny trano fidiovana fa tsy olana amin'ny kalitao!
2020 / 12 / 12 6184